Jacaylka, Galmada iyo Internetka Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Jacaylka, Galmada iyo Internetka
"Waa maxay jacayl?" waa mid ka mid ah kuwa loogu raadinta badan yahay shuruudaha internetka. Gabagabadii Daraasadda Grant, oo ah cilmi baaris muddo 75 sano ah ka socotay Jaamacadda Harvard, ayaa ahayd in "farxaddu ay tahay jacayl". Waxay muujisay in xiriirada diiran ay yihiin aasaaska ugu wanaagsan ee caafimaadka, maalka iyo nolosha dheer. Taas bedelkeeda, qabatinka, niyadjabka iyo neerfaha ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee soo food saaray xaaladdan aadka loo doonayo. Fahmitaanka halista ku xeeran isticmaalka soodhaweynta internetka ayaa muhiim ah haddii aan dooneyno inaan iska ilaalino inaan ku dhex baddalno balwadda oo aan helno xiriir jacayl qanciya halkii Qabsashada jacaylka, galmada iyo internetka runtii waa muhiim.